ရွှေနိုင်ငံ: တန်ချိန်ထောင်ချီသော မူးယစ်ဆေးဝါးများ “ဖြစ်ရပ်မှန်လား---လုပ်ကြံပြောဆိုမှုလား” - အပိုင်း (၄)
မူးယစ်ဆေးဝါးမှရရှိသော ငွေကြေးများမည်မျှများပြားသည်ကို နောက်ကြောင်းခြေရာခံလိုက်၍မရနိုင်ဘဲ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် အထောက်အထားများလည်းလက်ရှိကာလတွင်မရှိပေ။ ထိုဟိုတယ်များ၊ Spa နှင့် ဂေါက်ကွင်းများသည်လည်း မူးယစ်ဆေးဝါးများ လျှို့ဝှက်သိမ်းဆည်းရာ အဓိကနေရာများနှင့် ဖြန့်ဖြူးရာနေရာများလည်းဖြစ်လာပါသည်။
“ဝ” တပ်ဖွဲ့သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစတင်ကာ မူးယစ်ဆေးဝါးလုပ်ငန်းများမှတစ်ဆင့် လက်နက် ရောင်းဝယ်မှုလုပ်ငန်းများကိုပါ တိုးချဲ့၍ လျှို့ဝှက်စွာလုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိကာလတွင် “ဝ” တပ်ဖွဲ့သည် မြောက်ကိုရီးယားနှင့် လက်နက်ရောင်ဝယ်မှုလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု သိရှိရ ပါသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုလည်း မြောက်ကိုရီးယားသို့ ကွန်တိန်နာများဖြင့် သယ်ဆောင်ပြီး အပြန်တွင် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံလုပ် လက်နက်များကို ကွန်တိန်နာများဖြင့် အပြည့်သယ်ဆောင်လာ သည်ဟု မြောက်ကိုရီးယားသတင်းအရင်းအမြစ်များအရ သိရှိရပါသည်။ မြောက်ကိုရီးယားလုပ် လက်နက်များသယ်ဆောင်လာသော ကွန်တိန်နာများသည် မာလက်ကာရေလက်ကြားကို ဖြတ်သန်း၍ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်နှင့် စင်္ကာပူတို့ကို ရှောင်ရှားကာ သွားလာကြပါသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါး နှင့် လက်နက်ရောင်းဝယ်မှုများတွင် ကြားပွဲစားများအဖြစ်ပါဝင်သူများမှာ ထိုင်းနိုင်ငံသားများဖြစ်ပါသည်။ အရှေ့တောင်အာရှ၏ ခေတ်သစ်သမိုင်းကို ပြန်ကြည့်မည်ဆိုလျှင် လက်နက်ကိုင်သောင်းကျန်းသူများ ဖြစ်သည့် ခမာသောင်းကျန်းသူ၊ ခွန်ဆာ၏ MTA လော်စစ်ဟန်၏ ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့၊ KIA ၊ KNU ၊ မွန်သောင်းကျန်းသူနှင့် အခြားသောသောင်းကျန်းသူများအတွက် လက်နက်မှောင်ခို ရောင်းဝယ်ရာ ဒေသမှာ ထိုင်းနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသည် လက်နက်ရောင်းဝယ်မှုတွင် အဓိကနေရာမှ ပါဝင်နေသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့ရှိ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများကို အံ့အားသင့် စေသောအချက်တစ်ချက်မှာ ချင်းရိုင်ဒေသတွင် မွတ်စလင်သောင်းကျန်းသူများ ပေါ်ထွက်လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင် ကမ်းရိုးတန်းဒေသများနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသများမှ မွတ်စလင်များသည် အာဖဂန်နစ္စတန်ရှိ Pashtos များမှ ဆင်သက်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒေသတွင်းတွင် ၎င်းတို့သည် ရိုင်းစိုင်းသူများ၊ ရန်လိုသူများဟု သတ်မှတ်ထားပါသည်။ အာဖဂန်နစ္စတန်တွင် စစ်ပွဲစတင် ဖြစ်ပွားချိန်တွင် Pashtos လူမျိုးများသည် အက်ဒမန်ပင်လယ်လမ်းကြောင်းနှင့် Mergui ရှိ ဝေးလံခေါင်းပါးသည့်ကျွန်းစုများကို အသုံးချကာ ပါကစ္စတန်နှင့် အာဖဂန်နစ္စတန်တို့မှ လူများကို လူကုန်ကူးခြင်းများလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုဒေသများမှလူများကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံအတွင်းရှိ စစ်တကောင်းနှင့် ကော့ဘဇားခရိုင်တို့မှစတင်ကာ လူကုန်ကူးမှုများကိုလုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ ၎င်းတို့၏ တစ်ထောက်နားရပ်မှာ Mergui ရှိကျွန်းများနှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတို့ဖြစ်ပြီး ထိုမှတစ်ဆင့် ဩတြေးလျသို့ ဆက်လက်သွားရောက်ကြပါသည်။ လူကုန်ကူးခြင်း၊ လက်နက်မှောင်ခိုရောင်းဝယ်ခြင်းနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ခြင်းတို့မှ ငွေကြေးများရရှိလာသော မွတ်စလင်များသည် ၎င်းတို့၏ အခြေခံ လှုပ်ရှားနယ်မြေအဖြစ် ဘန်ကောက်သို့ပြောင်းရွှေ့လာပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိ ချင်းရိုင်သို့ ထပ်မ့ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကြပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှတာဝန်ရှိသူများသည်လည်း အရှေ့တောင်အာရှ တွင် လူကုန်ကူးမှု၊ လက်နက်မှောင်ခိုရောင်းဝယ်မှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးတရားမဝင်ရောင်ဝယ်မှုတို့လုပ်ဆောင် နေသော မွတ်စလင်များကို ဖမ်းဆီနိုင်မှုမရှိခြင်းနှင့် မသိကျိုးကျွံပြုမှုများကြောင့် မကြာခဏ စွပ်စွဲခြင်း ခံကြရပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိ သတင်းအရင်းအမြစ်များက ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံ များအရ ပြောကြားရာတွင် အိန္ဒိယ သို့မဟုတ် မွတ်စလင် လက်နက်ကိုင်သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့များကိုတွေ့ရသည်မှာ အထူးအဆန်းမဟုတ်ကြောင်း၊ တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်နှင့် အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ်တွင် တွင်လှုပ်ရှားနေသော အဖွဲ့များကို လွန်ခဲ့သောနှစ်ကအထိ မမြင်ဖူးမကြားဖူးကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
ရှမ်းလူမျိုး မူးယစ်ရာဇာ စိုင်းနော်ခမ်းအားဖမ်းဆီးရမိခြင်းနှင့် အမေရိကန် မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေးအေဂျင်စီတို့၏ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပရှိ မူးယစ်ဆေးဝါးမှောင်ခို ရောင်းဝယ်သည့်လမ်းကြောင်း ၂ ခု ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါသည်။ ပထမတစ်ခုမှာ လာအိုနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ တို့မှ တစ်ဆင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ ဖြစ်ပြီး ဒုတိယတစ်ခုမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတို့မှတစ်ဆင့် အရှေ့ပိုင်းနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းတို့သို့ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ အင်အားကောင်းသော အဓိကသောင်းကျန်းသူအဖွဲ့အစည်း ၄ ခုဖြစ်သည့် SSA ၊ “ဝ” တပ်ဖွဲ့၊ မိုင်းလားနှင့် KIO တို့သည် ပြည်ပမှအကူအညီများဖြင့် မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်မှု များကိုလုပ်ဆောင်ကာ များပြားလှသောငွေကြေးများရရှိပြီး ၎င်းတို့၏တပ်ဖွဲ့များအတွက် သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိက အကျိုးစီးပွားအတွက် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေသည့် အခြေအနေသည် များမကြာမီအချိန်ကာလတွင် အမေရိကန်၊ အနောက်ဥရောပနှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်း တို့အတွက် အလွန်အရေးကြီးသော ပဋိပက္ခဖြစ်ပေါ်လာစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
The KIO- Kachin Independence Organization
The KIO – the Kachin Independence Organization is also heavily involved in the drug trade unbelievably. Contrary to modern wisdom asareligious Baptist freedom fighter army, it is involved heavily in drug distribution business, especially inside the country and to India and China. Large cities such as Mandalay and Myitkyina, the capital of the Kachin State, are the “markets” to which the KIO monopolized the shipping and distribution of drugs. The money from this drug trade is re-invested in other legitimate businesses in Mainland China, especially in Yunnan province, where the KIO leaders have established friendship and partnership with the regional authorities sincealong time ago. Yin Muang Hotel in Yingcheng is owned by the Central headquarters of the KIO. Likewise, 123 Hotel in Chengguanzhen owned by chairman of the KIO Zong Hra, Shin Lee Jade company which offices are situated in Kunming, Guangzhau, and Yinjaing, owned by KIO lieutenant general In Bala, Jing Cheng Hotel and Jing Cheng Spa in Ruili owned by general Gwan Maw, golf course owned by the Jing Cheng hotel in Chengguanzhen are all re-investment schemes of the KIO for the drug money. These are only the most visible and known business. One can wonder how many more there can be as drug money is not traceable and there is no proof of money laundering or any mechanism at present. These hotels, spa and gold courses in turn became centers for hiding and distribution of drugs.
Since 2012, the Wa Army has extended their clandestine business from drug trafficking to gun running. The Wa army was reportedly involved in hitherto unknown activity of running guns from North Korea. Drugs were believed to be shipped to North Korea in containers and, on their return, these containers are filled with arms made in North Korea, sources believed. Containers filled with North Korean made arms were transported through the Straits of Malacca on container ships, the ports of call of which usually includes ports in Malaysia, Indonesia, Philippines as well as Singapore. Agents or middlemen involved in these drugs and arms trade sometimes are Thai nationals, which is not unusual if one look back at the history of modern South East Asia, in which the only source of arms for all the rebel armies, including the Khmer Rouge, Khun Sa’s MTA, Lo Hsing Han’s Kokang army, Kachin Independence Army, the Karen National Union, the Mon State army, etc, was Thailand and Thailand only.
One factor which came asashock to every government and law enforcement officials of Myanmar and Thailand was the sudden emergence of Muslim groups in Chaing Rai region, Thailand, as major players in gun running and drug trade. Originally from the coastal areas of Southern Myanmar in Tenninsarin division and Northern Malaysia, these Muslims are descendents of Pashtos from Afghanistan. Known in the region as “Pashu head hunters” they are traditionally ruthless and aggressive. Since the beginning of the war in Afghanistan, these Pashto were deeply involved in smuggling people from Afghanistan and Pakistan, using the Andaman sea route and the 900 remote islands of Mergui archipelago, trafficking people from the said areas, starting the voyage from Chittagong or Cox bazaar in Bangladesh. Their first leg is the Mergui archipelago and northern Indonesia, Arceh to be specific, and thence to Australia. These Muslims who acquiredasudden wealth from this human trafficking, gun running and drug trades, moved their bases of operations, first to Bangkok and now to Chaing Rai in Northern Thailand. Thai authorities are often accused of missing or ignoring these Pashto factor in South East Asian arms, drugs and human trafficking trades. Sources in Northern Myanmar or Burma told from their personal experience that it is notasurprise to see small groups of Indian or Muslim groups, armed sometimes, scattered along the Sino -Myanmar border as well as the Indo- Myanmar border areas, which was never heard or seen up until last year.
According to the statement of the captured Shan drug trafficker Sai Naw Kham and findings of the US Drug Enforcement Agency, the two visible drug smuggling routes out of Myanmar emerged. One is to the United States via Laos and Thailand to the east and to the Middle East via west of India and Bangladesh.
The four major rebel armies from Myanmar, namely the SSA, the Wa army, the Mong La army and the KIO, with outside support, have managed to acquire vast sum of money by trafficking drugs, to finance their armies as well as for personal wealth of their leaders. This volatile situation has pushed or may push in the very near future the United States, the Western Europe and the Middle East intoavery dangerous crisis.